Al-shabaab oo ku baaqay dagaal wejiyo cusub leh oo ka dhan ah howgalka ka socda dalka Soomaaliya – Radio Daljir
Luulyo 27, 2013 4:04 b 0
Ceel-buur, July 27, 2013 – Ururka Al-shabaab ee dagaalka culus ee wakhtiga dheer qaatay kula jirtay meleteriga huwanta ah ee taageera dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegay in ay kordhin doonaan weerarada ay ku qaadaan xaruumaha dowladda, saldhigyada, iyo dagaalada caadiga ah.
Afhayeenka ururka Al-shabaab sheikh Cali Maxamuud Raage Cali dheere oo ku sugan Ceel-buur ayaa la hadlay boqolaal dad-weyne ah oo ku sugan magaaladaasi, wuxuu ka dalbaday dadka deegaanka in ay ka qeyb noqdaan dagaalada lagu jiro ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda.
Wuxuu sheegay in kooxda al-shabaab ay sii kordhin doonto weerarada joogtada ah ee ay wadaan, iyo dagaalada ay kula jiraan ciidamada AMISOM, Ethopia iyo kuwa dowladda oo uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa taageera cadowga soo duulay.
? wiilasha xooga ah waa in ay ka qeyb noqdaan dagaalka dhanka ah cadowga, dadka waa weyn ee tamar ahaan liita waxaa la idiika baahan yahay ducadda, guushu waxay la jirtaa muslimiinta? ayuu yiri sheikh Cali dheere oo la hadlay shacabka Ceel-buur.
Ugu dambeyntii ururka Al-shabaab ayaa war-bixin maalmo ka hor ay soo saareen ku sheegay in ay horaantii bisha Rammadaan ay fuliyeen weeraro baaxad leh oo ka dhan ah howgalka Soomaaliya ka socda, waxay tilmaameen in ay geysteen ka badan 100 weerar isla markaasna ay sii wadi doonaan dagaalka.